အိုင်ပက်ဒ်တမ်းချင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အိုင်ပက်ဒ်တမ်းချင်း
Posted by winterkoe on Feb 20, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်က Toilet ထဲမှာစာဖတ်ရင်းနဲ့ အိုင်ပက်ဒ်ပြုတ်ကျတယ်။ နိမ့်နိမ့်လေးပါ.. ကာဗာပါတော့ဘာမှတော့ဒဏ်ရာမရဘူးလေ။ ကံဆိုးချင်တော့ Touch Screen ကနည်းနည်းထစ်ချင်သလိုတော့ ဖြစ်သွားတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း ဖီးလ်နည်းနည်းငုပ်သွားမိတာနဲ့ ဆားဗစ်စင်တာသွားပြဖြစ်တယ်။ Apps တွေအားလုံးကို Wipe-off လုပ်မယ်ဆိုတော့ချီတုံချတုံဖြစ်သွားမိတယ်။
အဲလိုနဲ့ စိတ်ကမပြတ်မသားဖြစ်မိတော့ အိမ်ပဲပြန်လာမိတယ်။ တပတ်လောက်နေတော့ ဖီးလ်ကငုပ်နေတုန်း…အဲဒါနဲ့ စင်တာကိုပြန်ချီတက်ရပြန်ရော.. ဟိုရောက်တော့ ပြင်တာဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးလေးက တချက်ကြည့်ပြီး ပြောလေရဲ့.. iPad2အတွက် Apple ရဲ့ Policy ကအသစ်တလုံးပြန်လဲပေးတယ်ဆိုပဲ.. သူမလေးအပြောမှာ အံ့အားသင့်သွားမိတယ်။ သူမလေးက အပြောချိုချိုလေးနဲ့ နူးနူးညံ့ညံ့လေးလေ။ အဲဒါနဲ့ ငါးရက်စောင့်ပါတဲ့။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ…စောင့်ပေါ့..
ဒီကြားထဲမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်သူများတွေ အိုင်ပက်ဒ်သုံးနေတာကို အားကျသလိုတောင်ဖြစ်မိသေးတယ်။ ရှိတုန်းကမသိသာပေမယ့် မရှိတော့လဲ တမ်းတမိတယ်လေ.. သွားရွေးဖို့ကလဲ မအားတာနဲ့မသွားဖြစ်ဘူး။ (၇) ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ သူမလေးလိုပဲ ဝန်ထမ်းလေးတယောက်က ခပ်ချိုချိုသံစဉ်လေးနဲ့ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ အိုင်ပက်ဒ် လာယူတော့နော်တဲ့။ အိုကေ..ဒီနေ့တော့သွားရွေးရမယ်ဆိုပြီး…Rဇာနည်သီချင်းတပုဒ်.. ပြန်လာပြီ..ဆိုလားဘာလား အဲဒါကိုခပ်ဖွဖွရွတ်ရင်းနဲ့ အားမာန်အပြည့်နဲ့ တိုင်းမ်စကွဲ ကိုချီတက်သွားတယ်..
ဟိုရောက်တော့ အိုင်ဖုန်းတလုံးကိုင်ပြီး တော်တော်ကြာကြာလျှောက်မေးနေတဲ့ Sexy တော်တော်ကျတဲ့ နဲ့တရုတ်မ (၂) ယောက်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုသိပ်မရှိတဲ့ Indian (၃) ယောက်ကိုထိုင်စောင့်နေရတယ်လေ.. ရှိတာက Customer Service Assistant ဝန်ထမ်းက (၂) ယောက်ဆိုတော့ ဘာတတ်နိုင်မလဲ.. ခပ်တည်တည်နဲ့ထိုင်စောင့်နေရတယ်လေ။ ခဏနေတော့ လူဖြူနှစ်ယောက်ဝင်လာပြန်ရော.. အဲဒီ ၂ ယောက်ထဲက အူကြောင်ကြောင်နဲ့ အဖြူတကောင်က မထိုင်ပဲနဲ့ ပေကြောင်ပေကြောင်လုပ်နေတယ်.. အဲဒါနဲ့ ထိုင်နေလိုက်..ခုသွားရင်လဲစောင့်ခိုင်းလိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုက်မှ ဘေးမှာဝင်ထိုင်လေရဲ့။ နောက်တကောင်ကတော့ သူ့ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ ဘာကိုမှစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလေ။
အဲဒီမှာ မနက်ကလည်းဖုန်းဆက်တဲ့ ကိုယ့်ကိုမှတ်မိနေတဲ့တယောက်က (အမှန်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမှတ်မိပါတယ်..တယောက်က Azwin တဲ့..နောက်တယောက်က Flavia တဲ့..Roman နာမည်မျိုးလေးပေါ့) အိုင်ပက်ဒ်လာယူတာလားတဲ့..တန်းမေးတယ်..
အင်း.. လို့ဖြေလိုက်တော့ သူကအတွင်းခန်းထဲကိုခဏဝင်သွားလေရဲ့။ ခဏနေတော့ အင်ဂျင်နီယာတယောက်ထွက်လာပြီး လက်ထဲမှာ အိုင်ပက်ဒ်တလုံးကိုင်လာတာတွေ့တော့..အင်း..ငါ့ဟာထင်တယ်လို့တော့ စဉ်းစားမိတယ်လေ.. ဟုတ်တယ်..အဲဒါက ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်နေတယ်.. အဲဒါနဲ့ အိုင်ပက်ဒ်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ရော..အသစ်အတိုင်းပဲလေ..
ဒါ..အသစ်တလုံးလားလို့ သူမလေးကိုမေးကြည့်မိတော့.. ဟုတ်တယ်တဲ့..Replacement တဲ့..
အိုး..တော်တော်စိတ်ချမ်းသာသွားမိတယ်.. Apple ရဲ့ iPad နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Policy ကိုလည်းတော်တော်ခိုက်သွားတယ်လေ.. ဒီဘက်က အမေးအမြန်းထူတဲ့ အဖြူတယောက်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ Flavia ကိုတောင်လှည့်ပြီး How u doing Flavia! လုပ်လိုက်မိသေးတယ်.. သူမလေးကထုံးစံအတိုင်းပေါ့..အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ နှုတ်ဆက်လေရဲ့.. So sweet!
အဲဒါနဲ့ Azwin က အိုင်ပက်ဒ်ကို ထုပ်ပိုးနေတာကိုခဏစောင့်နေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပြေစာမှာလက်ခံထိုးပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ့်အတွက်ကော်ပီတစောင်လက်ခံလိုက်တယ်.. ပြီးတော့ Thank u Azwin ပေါ့.. သူမလေးအပြုံးတွေကလည်း တော်တော်ချိုပါတယ်။ Thank u နဲ့ Bye နဲ့တော့ သူမလေးက ခဏခဏကိုပဲပြောလေရဲ့။ နောက် အိုင်ပက်ဒ်က 3G Micro SIM Card ကိုအထုတ်အသွင်းလုပ်တဲ့ (Pin) ပင်လေးပျောက်နေတာနဲ့ သူမလေးကိုမေးကြည့်တော့ သူ့မှာလည်း တချောင်းပဲရှိလို့ပါ..အပိုမရှိဘူးတဲ့..အထဲက Technician မှာတောင် တချောင်းပဲရှိတယ်ဆိုပဲ.. Level One က Mac Studio မှာမေးကြည့်လေတဲ့..
အဲဒါနဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော.. နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာတယ်။ အပြန်ကျတော့ စိတ်ထဲမှာ Apple ရယ်.. Azmin ရယ်..Flavia တို့အကြောင်းတလှည့်စီတွေးမိသေးတာပေါ့.. Steve Jobs တောင်ပါလိုက်သေး..
Winter Koe has written7post in this Website..
View all posts by winterkoe →
Apple ကလဲပေးရင်တောင် ဒီကဟာတွေက အင်တင်တင်လုပ်နေတာထင်တယ်။
ဒီမှာက စင်ကာပူတွေပဲရှိတယ်ထင်တယ်။တကယ်လို့ပျက်ရင် ပို့ရတာလွယ်အောင်လို့လေ။
ဟုတ်တယ်..ကျနော်လဲ တခါတလေ ဂိမ်းဆော့တယ်၊ များသောအားဖြင့်တော့ သတင်းတွေနဲ့ ဆောင်းပါးတွေဖတ်ဖြစ်တာများပါတယ်။ Apple ရဲ့ Policy ကိုက Warranty Period အတွင်းမှာဆိုရင်အသစ်လဲပေးတာပါ။ Apple Authorized Service Centre တွေကရောက်လာတဲ့ အိုင်ပက်ဒ်၊ အိုင်ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီး စင်္ကာပူပို့ပေးပါတယ်။ နောက်..စင်္ကာပူမှာထိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီက လဲပေးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလဲ ဆားဗစ်နဲ့ပတ်သက်တာကို တခါတည်းမေးဝယ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြဿနာက မြန်မာပြည်မှာ Apple Authorized Service Center ရှိမရှိကို မသိပါဘူး။ မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အိုင်ပက်ဒ်က Warranty ကဒ်ပြားပြစရာမလိုပါဘူး။ သူတို့ System ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ Warranty Period ကိုသူတို့ကြည့်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသွားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိရင် ထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ ကျနော့်ကိုတော့ Apple Authorized Service Centre က (၅) ရက်ပဲချိန်းတာပါ။ သွားယူဖြစ်တာကတော့ (ရ) ရက်မြောက်နေ့မှပါ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ…
ifunbox ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလေးရှိတယ်ဗျ အဲ့ဒါလေးနဲ့ ကိုယ့်သီချင်းတွေ movie , game တွေကို back-up လုပ်ထားလို့ရတယ်။Ipad,ipod ထဲကသီချင်းတွေ ဂိမ်းတွေကိုများသောအားဖြင့် ကိုယ့်စက်ထဲကိုကူးလို့မရဘူး
အဲ့ဒီ ဆော့ဝဲနဲ့ဆို ကိုယ့်စက်ထဲ ကူးထားလို့ရတယ်..
ဟယ်….. သူများဟာ နေတာ အကောင်း စိတ်ဆင်းရဲအောင် လာလုပ်နေတယ်
အော်အိုင်ပက် အိုင်ပက် ငါ့မှာ သူများတွေလို ပက်စရာ ရွှံ.အိုင်လေးတောင်မရှိပါလား… တော်ပြီး ဒီပို.စ်ထဲမှာ ၀င်မမန်.တော့ဘူး မျက်နှာငယ်ဒယ်………….
ချောင်းပက် တို့ 
ပက်ချိန်နဲ့ ပက်တာ ရှိတယ် ပက်မလား
iPad ကြိုက်လို့ ဝယ်မိပါတယ်။ခုတော့ ipad2 iPad 3ပြီးတော့